Maxaan sameeyaa haddii taayirka gaariga matoorku jabo
Gawaarida la taaban karo ee xamuulka qaada ayaa wata culays badan, xaaladaha waddooyinkuna inta badan way liitaan, marka waa ay fududahay in taayirku go'do oo ay xoqdo arrimaha shisheeyaha iyo waxyaabaha afku ka qaaddo ee wadada. Hawlgalka heerkulka sare ayaa sidoo kale ah tijaabo weyn oo loogu talagalay taayirada gawaarida waaweyn ee matoorka, oo yareyn kara noloshooda adeegga, iyada oo aan la xusin dhacdada isu soo baxa daaqada. Sidee loo hawlgaliyaa markay ku meel gaadh tahay?
1. Codso xabagta, sug inta xabagta ku qallaji hooska, ku dheji caagagga iyo xargaha xargaha, ka dibna isku xir si aad uga fogaato in hawadu ku xirnaato.
2. Waa lagama maarmaan in la tolo dhaawacyada dibedda ee taayirka iyadoo la adeegsanayo boorsada dayactirka taayirrada oo la mid ah cabirka taayirka, ka dibna buuxi taayirka dayactirka taayirka. Waa in la ogaadaa in buuxinta bakeeriga taayirku ay ka yaraanayaan 2-3 mm ka sarreysa tareenka.
3. U adeegso fidiyaha taayirrada si aad u ballaadhiso taayirrada, uxir bacaha hawada suudhka dhoobada ah ama ku daboolan budo sariirta ah, ka dibna ku shub taayirrada caagga sare, ku dar xaashi birta badhka caarada sare iyo caarada hoose, saar saxanka caagga ah dusha sare ee bacda hawada, ka dibna saar saxan bir ah si aad u dayactirto bacda hawada, geli bir bir riixaya kuna rakib meesha rasaasta rasaasta.
4. Adkee labada xogood ee rasaasta si aad iskugu cadajiso taayirrada. Hubso in taayirku si fiican u daboolayo caaryada. Haddaysan ahayn, fur daboolka macdanta "lead" iyo birta riixeysa, ka dibna hagaaji bilowga.
5. Ka jar caagagga haray ee siilka ah si aad u hubiso inuu taraafigu fidsan yahay.
Shaqaalaha dayactirka ah, haddii ay dayactiraan marar badan oo aan lahayn waayo-aragnimo, waxay had iyo jeer isku dayaan inay ku dayactiraan taayirrada qashinka. Markay dayactirayaan, badanaa waxay hubiyaan in heerkulka mashiinka dayactirka taayirku ay caadi yihiin iyo in cadaadiska boorsada hawada ay caadi tahay. Xiro muraayadaha difaaca marka aad isticmaaleyso Booqday Furimaha Dagaalka; si fiican u qabo weelka si tartiib ah una riix si tartiib tartiib ah.
Maalmahan, taayirada ayaa ka qaalisan. Haddii uu jiro dillaac yar, waxay badbaadin kartaa lacag badan haddii la saxo. Si kastaba ha noqotee, haddii dillaacyadu weyn yahay nabadgelyada awgood, wali waxaan ubaahanahay inaan badalno.
Gawaarida yar yar ee taangiga ah waa nooc ka mid ah qalabka farsamada ee ay adeegsadaan dhinacyo badan oo dhismaha ah, kuwaas oo si weyn u wanaajin kara waxqabadka dhismaha. Dhismaha, maxaa yeelay way ku habboon tahay in la guuro oo la isticmaalo, waxaa soo dhoweynaya xisbiyada badankood dhismaha.
Waqtiga boostada: May-19-2020